म एक YouTubotato हुँ Martech Zone
शनिबार, जून १,, २०१। आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
आज मैले जाँच गरें AppleTV अपडेटका लागि र त्यहाँ एक थियो। मेरो chagrin धेरै, अपडेट राख्नु Youtube मा पहुँच गर्नुहोस् AppleTV। गुण उत्कृष्ट छ, मेनू प्रणाली उज्जवल छ, र यो अब नेभिगेट गर्न र भिडियोहरू जाँच गर्न धेरै नै सजिलो छ। यूट्यूब वेबसाइटबाट नै सुधारिएको छ। यदि तपाईंले एक AppleTV प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, यसले यो लायक बनाउँदछ!
यस हप्ताको अन्तमा म एक AppleTV YouTubotato हुँ (र सायद अधिक सप्ताहन्तमा आउन)। आज मनपर्ने भिडियो?
ईमेल मार्केटिंग सूत्रहरू र कुञ्जी सूचकहरू
जुन 23, 2007 मा 6: 39 PM
सुरुमा मैले कुनै अug्गालो लिन आउँदिन, र भिडियोको सन्देश, त्यो हो कि तिम्रो छिमेकीलाई अब माया छैन। सन्देश एकदम विपरित थियो देख्दा म खुसी छु। म बुझ्दिन किन किन फ्री हगलाई प्रतिबन्ध लगाइनेछ।